Akụkọ - Locsmith ngwaọrụ-9in1 HUK auto lockpick
Ngwa Locsith-9in1 HUK auto lockpick
Otu; Auto lockpick 9in1 unlocking ụkpụrụ; (nro na ike)
Na tiori, ekwesiri ịpinye mpempe mkpọchi ọ bụla (mgbe ụfọdụ a ga-emeghe ma ọ bụrụ na apịghị ya, ọ ga-abụ na ọ kpatara nkenke nke ọrụ)
Mgbe ị na-egosi ihe nkiri na nkwado nke ọkụ fiber optic, jiri ọkpụkpọ ahụ iji nwalee. A ga-apịa ihe nkiri a ma ọ bụrụ na o siri ike, a gaghị agbanye ihe nkiri ahụ ma ọ bụrụ na ọ gbanye agbanwe. (Adighi emeghari putara na onye ozo no n’ike)
Na usoro nke akpọchi, naanị anyị kwesịrị ịpị mpempe mkpọchi ike iji chọta ihe dị nro na nke siri ike (chọpụta ihe siri ike n'etiti ọtụtụ mkpọchi mkpọ wee pịa)
Abụọ; esi arụ ọrụ na ngwa nhọrọ,
1 Ewepụghị-egwe ọka;
A. A pụghị ileru ụfọdụ ihe nkiri anya nke ọma n'otu oge, ha siri ike ịpị. Ha bụkarị mkpọchi ewepụghị ewepụ. Jirizie agịga kwụ ọtọ iji nwalee nwayo wee tụọ 45 abụọ. Karịsịa mgbe nke ugbu a bụ nke ihe nkiri dị elu na nke abụọ bụ nke obere ihe nkiri mgbe agbachi mkpọchi ahụ (dịka ọmụmaatụ, mgbe mpempe NSN14 dị n'ihu bụ nọmba 4 na ibe na-esote bụ nọmba 1 ), agịga kwụ ọtọ na-esiri ike ịkọwa n'oge a, yabụ ị ga-eji 45 gaa. Kwekọrọ cleat
(Ka ị na-abanye n'ime, ọ ga-esiri gị ike idebe) specificzọ a kapịrị ọnụ bụ ịgbatị agịga kwụ ọtọ n'ime ime, pịa ala niile, wee jiri nwayọọ nwayọọ wepụ agịga kwụ ọtọ, ka ị nwee ike ịlele elu nke mkpọchi mpempe na ọnụ ọgụgụ nke iberibe (emela hụ na ị nwekwara ike ịdabere na ụda mkpọchi mkpọchi iji gee ntị) ịghọta.
B, enwere igwe puru iche puru iche (ToY43 na TOY43AT) n'ihi udiri ihe eji emechi mkpọchi ahụ, ana m eche na ọ dị mkpa ka o kwekọọ na Nke 67.
Ihe omume TOY43 (kewaa otu ụzọ ụzọ abụọ ma wụnye ya n'otu oghere mkpọchi ahụ - iberibe ya, ọ na-esiri ike iji agịga kwụ ọtọ pịa mpekere mpekere otu oge)
Njirimara TOY43AT, (mkpọchi mkpọchi ahụ dị n'ụdị trapezoid, ma nwee mgbochi mgba ọkụ n'ime mkpọchi ahụ, nke na-egbochi ngwa ọrụ ịbanye, nke na-eme ka nsogbu ahụ sie ike)
N'oge a, echere m na ọ kachasị mma iji akụkụ agbakwunye nke Nke 67 iji pịa mpempe akwụkwọ ma ọ bụ zere ọgịrịga mgbochi iji mee ka oge mmeghe ahụ dị ngwa.
2 Mepee mkpọchi ụgbọ ala dị n'ime ka (HU66 HU100 HU92 ,,,)
N'okpuru ọkụ nke oriọna brazing, anyị nwere ike ịlele ọtụtụ n'ime mkpọchi mkpọchi ahụ, naanị anyị nwere ike ịhụ naanị ike nke mkpọchi mkpọchi.
Ọ bụrụ na ihe nkiri na-aga n'ihu na-emesi ike, e nwere ụzọ abụọ.
A, Bo Tsai kwadoro isi ihe nkiri ahụ nke ukwuu. N'oge a, Y ga-adịtụ obere enyemaka. Iji gbochie ndị cleats ndị ọzọ ịwụli elu, anyị na-anwa ịgbanye ndị cleats ka o kwere mee.
B, ahapụbeghị efere mkpọchi ma (gaa n'ihu pịa efere mkpọchi)
3 Mepee mkpọchi ụgbọ ala dị ka (HU101 HHU64)
Akụkụ kachasị nsogbu nke ụdị mkpọchi a bụ ụjọ nke ịpị mkpọchi mkpọchi ahụ (mpempe mkpọchi enweghị ike gbanwee ya dịka mkpọchi mkpọchi ime), yabụ ịkwesịrị ị attentiona ntị mgbe ị na-emepe ụdị mkpọchi a.
A; Jikwaa ebe dị anya nke Pozi na-akwagharị oge ọ bụla iji zere ịpị ndị dị nso
B; A ga-etinye ike nke ịpị mpempe mkpọchi ahụ nwayọ iji zere ịpị mkpọchi ahụ
C; Mgbe naanị 1 na 2 ikpeazụ na-emesi ike, gbalịa ịkwado Nke 89 iji pịa iji zere mmebi nke ngwá ọrụ ahụ
Nkwado ndị a dị n'elu bụ:
Mkpọchi igwe mkpọchi ala 1. 2.4.5 Esịt-igwe milling 1.3.8.9 Mpụga mpụga; 1.3.8.9
Na mgbakwunye, Nke 2 (mepee usoro nke elu na nke ala, ọdịda ahụ ekwesịghị ịdị oke oke na mpụta anọ. Ọ kachasị mma ịta obere oghere n'akụkụ elu na nke ala iji gbochie ịmịpụ mgbe a na-agbanye mgbawa. Ọ nwere ọrụ ebube utịp maka ochie Mercedes-Benz HU39, BMW, HU58, Volvo, NE66 n'ihi na ndị a mkpọchi na-mmiri kwukwara. Crude)
Atọ; otu esi eji Y faịlụ n'ụzọ ziri ezi
Na usoro nke akpọchi na-agbakwunye ike, na Y gia na-eji nwayọọ nwayọọ. Etinyela na njedebe. Nke a ga - eme ka mkpọchi mkpọchi ahụ sie ike ma sie ike ịmalite mkpọchi mkpọchi. Ọ bụrụ na a na-amanye efere mkpọchi n'ike, a ga-emebi ngwá ọrụ ahụ wee pịa ya.
Mgbe a kpọchiri ihe nkiri mkpọchi ma chọọ ka akpọọ ya, usoro ọkpụkpọ a dịkwa nwayọ nwayọ. Ma ọ bụghị ya, ụfọdụ mkpọchi ndị ewepụtara ahapụ ga-ada. Ya mere, ma emepere ya ma ọ bụ kpọọ ya n’azụ, ọ na - eji nwayọ nwayọ. Mgbe ihe nkiri ahụ ruru n'akụkụ aka nri, ihe nkiri ahụ ga-ekewapụ.
Okwu ederede ndi a so na onu ogugu di n’elu dika ihe omuma atu;
Nke 1; agịga kwụ ọtọ (nwere ike mepee ụzọ mkpọchi ụgbọ ala ọ bụla nke na-abụghị ogidi n'akụkụ, okwu a bụ na dobe ahụ ekwesịghị ịkarị oke. Ọ bụrụ na dobe ahụ buru oke ibu, nkwado aka abụọ dị oke aghụghọ ma ejiri usoro mmeghe mee ihe) ịgbatị oge mmeghe)
Nke 2; isi okirikiri (mepee usoro nke elu na nke ala, ọdịda ahụ ekwesịghị ịdị oke oke na mpụta anọ, ọ kachasị mma ịmị obere oghere n'akụkụ elu na nke ala iji gbochie ịmịpụ mgbe a hụrụ mgbawa. Ọ nwere mmetụta ọrụ ebube n'ihi na ochie Mercedes-Benz HU39, BMW HU58, Volvo NE66 n'ihi na ndị a ji akpọchi ha Spring obi ike)
Nke 3; Shọvelụ (mepee ụdị mkpọchi ime na mpụga niile dị ka Mercedes-Benz na BMW, gụnyere ochie Mercedes-Benz na BMW (a na-atụ aro ka ị jiri shọvel na mbido mbụ wee gbanwee gaa Nr. 2 n'oge na-esote) TOY2 Toyota milling milling track abuo apughi imeghe shọvel (ohere pere mpe pere mpe, odi nke mbu. 1 dị ntakịrị ka emepe), a ga-eji shọvel mepee usoro TOY2.
45; Horseshoe (otu nke elu na nke ala, nke nwere usoro mmeghe nke 1 na nnukwu ọdịda, nke 1 na 2 nwere ike iji rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na dobe ahụ pere mpe, ọ bụrụ na nkedo ahụ pere mpe, jiri Nr. 45, nke na-enyekarị nsogbu. abanyela n'ime, ọkachasị mkpọchi Mgbe mkpụrụedemede ukwu na nke ala dị n'ọnụ ọnụ nke ọ bụla nwere nnukwu ihe nkiri)
67; gbakwunyere inyinya inyinya (enwere ike ikwu na o bilitere na ala ma obu enwere ike ikwu na ala aka ekpe ya na elu aka nri ya, ya na uzo mbu nke inyeaka TOY43AT usoro mkpọchi na mkpọchi TOY43 Nke 4, iberibe 7 (abuo abuo nke otu mkpọchi oghere) ọnụ (igbochi naanị ịpị ọkara nke isi mkpọchi)
89; Ọkara shọvel (iji nyere aka imeghe mkpọchi aka ekpe na aka nri, kamakwa obere oghere (dịka HU64 HU101) mgbe mkpọchi ahụ meghere ngwa ngwa, ọ bụ ezigbo onye inyeaka maka ịgbakwunye ike)
Na nchikota: Ọ bụrụ na ejiri ngwa ọrụ eriri optic ahụ rụọ ọrụ nke ọma, ọ nwere ike imepe mkpọchi ụzọ ụgbọ ala ọ bụla na-abụghị ogidi n'akụkụ. Usoro mmeghe chọrọ nkwado nke aka abụọ. Ejila aka ike pịa